Vokatra lojy any Boeny : mazava ny fisokafan’ny tsena any Eoropa sy Afrika | NewsMada
Vokatra lojy any Boeny : mazava ny fisokafan’ny tsena any Eoropa sy Afrika
Tsy mitsahatra mitady izay hananana fenitra sy kalitao ara-dalàna momba ny famokarana lojy ny any amin’ny faritra Boeny. Napetraka ho vokatra filamatra izany lojy izany hifaninanana eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Mitohy ihany ny fiaraha-midinika eo amin’ny ny tompon’andraiki-panjakana sy ireo mpandraharaha isan-tsokajiny any Boeny, ny 12 mey lasa teo, ho fankatoavana ny fenitra sy ny fanarahan-dalàna ara-teknika momba ny vokatra lojy. Niara-nidinika tamin’ireo mpamboly sy mpandraharaha ireo koa ny avy ao amin’ny minisiteran’ny Varotra.
Horaiketina amin’ny bokin’ny lalànam-barotra manan-kery eto Madagasikara ny seha-pihariana lojy. Hamoraina ny haba fanondranana azy rehefa voafehy ny lalàna sy ny fenitra rehetra tsy maintsy harahina. Kendrena samy hahazo tombony amin’izany ny mpamboly, ny mpanondrana ary ny faritra hivoahany. Manohana izany ny Vondrona eoropeanina ary hiantoka ny famatsiam-bola ny Tahiry eoropeanina momba ny fampandrosoana na ny Fed (Fonds Européen pour le développement). Mazava, araka izany, ny fisokafan’ny lalam-barotra amin’ity vokatra ity any Eoropa sy aty Afrika.
Hatramin’izay, tsy mbola nisy fepetra na lalàna nifehezana io karazam-bokatra io, nefa be mpanafatra any ivelany. Ankilan’izay, mbola tsy mahafehy ny fenitra sy kalitao takin’ny tsena iraisam-pirenena ny mpamboly sy ny mpanangom-bokatra. Vokatr’izay, niteraka fatiantoka hatrany tamin’ireo mpandraharaha izany sy nampitotongana ny vidiny teny amin’ny mpamokatra.
Nanaovana atrikasa matetika sy nandraisana fepetra maro ny vokatra lojy any Boeny. Misy koa anefa faritra hafa mamboly azy io, toy ny any Melaky, Atsimo Andrefana, izay tokony hanaraka izao ataon’ny any Boeny izao. Mbola betsaka ireo vokatra hafa any amin’ireo faritra ireo, ohatra, ny voanjo sy ny tsaramaso, izay tokony handraisana fepetra hentitra ny fanatsarana ny famokarana azy ireny hidirana eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.